Delta Air Lines na LATAM weputara codeshare na Colombia, Ecuador na Peru
Home » Akụkọ ụgbọ elu » Delta Air Lines na LATAM weputara codeshare na Colombia, Ecuador na Peru
Delta Air Lines na LATAM ga-ebuputa codeshare maka ugbo elu nke ufodu ndi oru LATAM na Colombia, Ecuador na Peru bidoro na nkeji nke mbu nke 2020, rue mgbe nnata nke nnabata ndi ochichi bara uru.
Codeshare ahụ ga-enye ndị ahịa mgbakwunye njikọta n'etiti ihe 74 gafere na United States na ihe ruru 51 na-aga South America.
Delta na-atụ anya ịgbasa ohere codeshare iji tinye ọtụtụ ebe n'ọdịnihu. Ndị ụgbọ elu na-arụkwa ọrụ iji webata usoro mmegharị flyer ugboro ugboro na nnweta ezumike ezumike.
"Nke a bụ ihe dị mkpa maka ndị ahịa ka anyị na-amalite ịnyefe na mmekọrịta mgbanwe n'etiti Delta na LATAM kwupụtara na mbido afọ a," ka Steve Sear, Delta President - International na Executive Vice President - Global Sales kwuru. “Ozugbo amachachara nke a, mmekọrịta a ga-enye anyị ike ịnye ndị ahịa anyị ụlọ ọrụ na - eduga ụlọ ọrụ na ọrụ dị elu gafee Amerika.”
Na onwa Septemba, Delta na LATAM kwuputara nkwekorita nke ghachikota ndi isi ugbo elu na North na South America, bu nke emere ozugbo ha gha emezigharia uzo ndi njem kariri uzo 435 n’uwa dum. Ọganihu a na-emewanye nke ọma nọ n'okpuru nkwado gọọmentị na usoro iwu.
DHS chọrọ ka amanyere ndị America niile na-enyocha ọdịdị ọdụ ụgbọ elu
SB Architects na-agba Ọganiike Na-aga nke Ọma Iji Nwee Obi Cytọ na Afọ Inye Ihe
Carnival Cruise Line na-ekwupụta atụmatụ atụmatụ ịmalitegharị ọnwa July site na ọdụ ụgbọ mmiri US, mgbakwunye ndị ọzọ akagbuo